WV waxay xaqiijisay ku dhowaad 500 xaaladood oo cusub oo COVID-19 ah, saddex degmo ayaa casaan ah | WDVM25 & DCW50
Charleston, West Virginia (WOWK) -Iyadoo gobolka uu ka warbixiyay ku dhowaad 500 kiis oo cusub oo COVID-19 ah, seddex degmo ayaa haatan lagu muujiyay casaan khariidada nidaamka digniinta gobolka West Virginia. Waaxda Caafimaadka iyo Shaqaalaha ee West Virginia ayaa xaqiijisay 495 kiis oo cusub oo ah COVID-19 24-kii saac ee la soo dhaafay. ...Akhri wax dheeraad ah »
Taariikhda Shiinaha, Shiinuhu wuxuu u adeegsaday baangadda hub militari oo dagaal, baangadana waxaa loo adeegsan jiray da ’kasta, isugeyn iyo gubasho waa sharaxaad ku saabsan doorka muhiimka ah ee baangaddu ​​leedahay waqtiyadii hore. Markii waqtiyadu soo ifbaxayeen, baangada waxaa si tartiib tartiib ah loogu beddelay mashiinno casri ah, laakiin ...Akhri wax dheeraad ah »
GEMLIGHT MACHETE BILAASH
Birta kaarboonku waa walxaha soo jireenka ah ee loo adeegsado samaynta bacaha. Kaarboon waxaa lagu daraa birta si ay u siiso awooda birta una kordhiso adkaanta dawalada, laakiin kordhinta kaarboonku waxay sidoo kale ka dhigaysaa birta mid jajaban. Birta kaarboonku waxay jirtay in ka badan 4,000 yrs. Isticmaalka karbo ...Akhri wax dheeraad ah »
Sida Loo Daryeelo & Loo Dayactiro Machete-kaaga
DARYEELKA BADBAADADA Imika iibinta ugu fiican uguna fiican ee loo adeegsaday waa birta Carbon Guga Sare, Gemlight machete waxay isticmaashaa birta guga kaarboonka sare leh ee Mn la xoojiyay. Laakiin garbaha birta kaarboonku si fudud ayaa loo xoqay, waana in had iyo jeer lagu daboolaa lakab khafiif ah oo saliid ah si looga hortago miridhku. Saliida waxay ka hortagtaa qoyaan ...Akhri wax dheeraad ah »